अमेरिकामा नानोरादार अलटाइटर मार्चि General सामान्य उड्डयन क्षेत्र-समाचार-हुनान नानोरादार विज्ञान तथा टेक्नोलोजी कं, लिमिटेड,
अमेरिका सामान्य उड्डयन क्षेत्र मा Nanoradar Altimeter मार्च
समय: 2018-02-28 हिट्स: 64
जब व्यक्तिहरू नयाँ वर्ष २०१ for को लागि उत्सव मनाइरहेका थिए, नानोरादार आपूर्ति श्रृंखलाले अझै किल्ला समात्यो संयुक्त राज्य अमेरिकामा डेलिभरीको ग्यारेन्टी गर्न। के होशियारीले बक्समा प्याक गरिएको हो एनआरए २,, एक विश्वसनीय र उच्च प्रदर्शन रडार अल्टिमटर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अन्तर्गत नानोरादारले निर्मित, जुन निजी विमानमा लागू गरिएको थियो। रडारको कुरा गर्दा, मानिसहरू प्याट्रियटहरू, थाडा, एजिस र अमेरिकाका अन्य सैन्य रडारसँग परिचित छन्। यस्तो उच्च विकसित रडार देशले किन चीनबाट साना रडार खरीद गर्दछ?
अमेरिकी निजी विमानको फस्टाउँदो विकास। निजी विमान र सामान्य उड्डयनको खोजीमा हामीले विश्वको प्रमुख सामान्य उड्डयन शक्ति --- संयुक्त राज्य अमेरिकाको बारेमा कुरा गर्नुपर्नेछ, जहाँ "एयर ट्याक्सी" विकास एक निश्चित चरणमा पुगेको छ। संयुक्त राज्यमा सबै इजाजतपत्र पायलटहरूले निजी विमान उडान गर्न सक्दछन्, २ 250,000०,००० भन्दा बढी पाइलटहरू शुद्ध निजी विमान पाइलट हुन्। संयुक्त राज्यमा २०,००० एयरपोर्ट छन्, ती मध्ये धेरै जसो व्यक्तित्व र समुदायको स्वामित्वमा छ। अनुसन्धानले देखाउँदछ कि संसारको aircraft०% निजी विमानहरू संयुक्त राज्य अमेरिकामा उड्दछन्। वर्तमानमा संयुक्त राज्य अमेरिकासँग 20,000००,००० भन्दा बढी सामान्य उड्डयन विमान छ र यसले व्यवसायिक हवाईजहाज, निजी हवाइजहाज, शैक्षिक हवाईजहाज, हवाई स्प्रेing्ग, हवाई अवलोकन, सार्वजनिक हवाई यातायात र "एयर ट्याक्सी", आदि जस्ता विस्तृत अनुप्रयोग क्षेत्र कभर गरेको छ।
निजी विमान को कुञ्जी घटक --- alimeter:
जब अमेरिकाको निजी विमानमा आउँदछ, हामी यसको मुख्य अंश ---- altimeter लाई बेवास्ता गर्न सक्दैनौं, जुन एक विमानको उचाई मापन गर्न प्रयोग गरिने उपकरण हो। अल्टिमेटर उचाई मापन गर्न र यसलाई खुट्टाले प्रदर्शन गर्न ब्यारोमीटरमा निर्भर गर्दछ।
कसरी अल्टिमेटर काम गर्दछ?
लगभग विमानहरूको अलटाइटर क्यालिब्रेटेड ब्यारोमिटर हो, जसले वायुमण्डलको दबाव गणना गरी उचाई प्रदर्शन गर्दछ। स्थिर पोर्ट, विमानको बाहिरी भागमा परिष्कृत लीभर र गियर प्रणालीको साथ, यसले कुनै पनि वायुमंडलीय परिवर्तनहरू मापन गर्न सक्छ, जुन उचाई डेटामा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। यी एलिमेटरहरूले समुद्री सतहको तुलनामा केवल वायुमण्डलको दबाव नापेर उचाइ मापन गर्दछन्। यद्यपि यो प्रदर्शन धेरै जसो मौसमबाट प्रभावित छ। मौसम प्रणालीले चापको उतार चढाव र अविश्वसनीय उचाइ गणना गर्न सक्दछ। यी चुनौतीहरूको जवाफमा, धेरै विमानहरूले विमान उपकरणहरूमा रडार अल्टिमेटर्स थप गर्दछ।
रडार अल्टिमेटरले कति सटीक काम गर्दछ?
रडार अल्टिमेटर उच्च क्षमता र प्रदर्शनको दुबै उच्च गतिको र कम उडान विमानहरूमा लागू गरियो। जस्तो कि हामी सबैलाई थाहा छ, मौसम र उडान गति परिवर्तनले उचाई जानकारीको ब्यारोमिटर पठन प्रदर्शनमा प्रभाव पार्छ। जे होस्, रडार अल्टिमेटरले सहि पठन पढाइ दिन्छ चाहे विमान कति छिटो उडान गर्दैछ। त्यो किनभने रडार रेडियो तरंग को यात्रा को बीचको र विमान र भूमि बीच एक सेकेन्ड लाग्छ।
किन Nanoradar NRA24 छनौट?
एनआरए २ एक कॉम्प्याक्ट के-ब्यान्ड अल्टिमटर रडार होनन नानोरादर साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी कं, लिमिटेड द्वारा विकसित गरिएको। यसले २ सेमी मापन शुद्धताको साथ २GGHz-ISM फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड अपनाउँछ। यसको कम्प्याक्ट आकार, उच्च संवेदनशीलता, हल्का तौल, सजिलो एकीकरण र भरपर्दो प्रदर्शन मानव रहित हवाई प्लेटफर्मको मांग पूरा गर्दछ (युएभी / यूएएस), हेलिकप्टर, सानो एयरपोर्ट र विस्तृत क्षेत्रहरूमा अन्य धेरै अनुप्रयोगहरू, र उत्पाद प्रदर्शन धेरैले राम्रोसँग मान्यता प्राप्त गरेको छ। साझेदारहरु
नानोरादार एनआरए २ pest सटीक कीटनाशक छिड़ोमा कृषि यूएभीलाई मद्दत गर्दछ
Nanoradar NRA24 सही रकम प्याकेज डेलिभरी हासिल गर्न रसद युएभीलाई सहायता गर्दछ
Nanoradar SP25 / NRA24 सटीक प्यारासूटमा UAV मद्दत गर्दछ
Nanoradar NRA24 ले नागरिक निजी विमान / अवतरणमा सामान्य उड्डयनमा मद्दत गर्दछ
नानोरादार मुख्यत: मानव रहित हवाई सवारी, उच्च अन्त्य सुरक्षा, बुद्धिमान यातायात, मोटर वाहन सुरक्षा, मानव रहित ड्राइभिंग र अन्य क्षेत्रहरूमा मार्केटिंग गर्दै २ 24GHz, G०GHz, G 60 GHz रडारहरूको उत्पादनहरू सहित। हालका वर्षहरूमा कम्पनीको द्रुत विकास, नानोरदारले सुरक्षा, यातायात, युएभी र अन्य उद्योगहरूमा ग्राहक समूहको विस्तृत श्रृंखला जितेको छ।
PREV: 【Alimeter इंजिन】 Nanoradar जारी: CAN इन्टरफेस यूएवी alimeter मिलिमीटर-तरंग रडार
अर्को: सक्रिय सुरक्षा | नानोरादार 450० मीटर रिजनल एआई रडार भिडियो निगरानी प्रणाली जारी गर्‍यो